2017-11-03 | fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
2017-11-03	Leaveacomment 146 Views
पोखरा,१७कार्तिक। पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको गण्डकी मेडिकल कजेलमा उपचाररत बिरामीको ज्यान गएको छ । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउपालिका–१ की गिता अर्यालको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो । मृतकका आफन्तहरुले विरोध गर्दा गण्डकी मेकेडिकल कजेल तनाब ग्रस्त बनेको छ । विस्तृत विवरण हाउन बाँकी रहेको छ ।
2017-11-03	Leaveacomment 70 Views
बच्चाको पहिलो खुराक भनेको आमाको दुध हो । आमाको दुधले नै बच्चालाई शारीरिक र मानसिक रुपमा विकास गर्छ । सुरुका दिनहरुमा आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउँदा पनि आमाका निम्ति अनौठो अनुभूति हुन्छ । कतिपय आमाहरु यतिबेला निकै धकाउँछन्, लजाउँछन् । तर, यसमा लजाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन, किनकी यो एउटा प्राकृतिक क्रिया हो । सार्वजनिकरुपमा स्तनपान सार्वजनिक स्थानमा हुनुहुन्छ र शिशु भोकले ...
2017-11-03	Leaveacomment 93 Views
झापा,१७ कार्तिक। झापाको दमकमा आफ्नै श्रीमतीको कुटाई बाट एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा दमक -९ शान्तिचोक बस्ने ५५ वर्षीय बिदुर नेपाली रहेका छन्। शुक्रबार आफ्नै श्रीमतीको कुटाइबाट बिदुरको मृत्यु भएको हो। ४८ वर्षीय श्रीमती सानुमाया दर्जीले मादकपदार्थ सेवन गरेर कुटपिट गर्दा उनको घरमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमान् श्रीमती दुबै जना मादक पदार्थ सेवन गरी सधै जसो ...
2017-11-03	Leaveacomment 78 Views
गोरखा, १७ कात्तिक। गृह गाउँपालिका गोरखाको सिरानचोक पुगनुभएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीय बासिन्दासँग हात मिलाउँदै प्रश्न सोदनुभो ‘दाइ आराम हुनुहुन्छ ? घरतिरको खबर के छ ?’ कसैलाई काकाकाकी त कसैलाई दाइभाइको साइनोले सम्बोधन गर्दै उहाँ अंकमाल गर्दै हुनुहुन्थ्यो । आसन्न निर्वाचनमा गोरखा २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बाबुराम भट्टराईको प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको श्रेष्ठ घरदैलो अभियानअन्तर्गत् सिरानचोकको अर्कुल पुगनुभएको थियो । कार्यकर्तासहित ...
2017-11-03	Leaveacomment 198 Views
चितवन, १७ कात्तिक । बाढीले बगाएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जस्थित वन्यजन्तुको बासस्थान क्षेत्रमा थुपारेको फोहर आजदेखि उठाउन थालिएको छ । क्षेत्रीय होटल संघको संयोजन तथा यहाँका एकदर्जन बढी संघ संस्थाको आयोजनामा आजदेखि फोहर उठाउन थालिएको हो । गत साउन २८ गते आएको बाढीले मकवानपुर जिल्लादेखिका फोहर बगाएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा थुपार्दा वन्यजन्तुलाई असर पार्ने देखिएकाले फोहर उठाउन थालिएको संघका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले ...
2017-11-03	Leaveacomment 95 Views
सिराहा,१७ कात्तिक। प्रतिनिधिसभामा ४ र प्रदेशमा ८ गरी १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिरहा जिल्लामा ७ जना पूर्व मन्त्रीहरु प्रत्यक्षतर्फको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । पूर्व मन्त्रीहरुको भिडन्तले सिरहाको चुनावलाई अझ रोचक बनाएको छ । कांग्रेसका प्रखर वक्ता प्रदीप गिरीदेखि २०७० को चुनावमा प्रचण्डसँग चुनाव लडेर हारेपछि चर्चित बनेका एमाले नेता लिलानाथ श्रेष्ठसम्मले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको यो चुनावमा पूर्वमन्त्रीहरुको लर्को नै लागेको छ । ...
2017-11-03	Leaveacomment 80 Views
कास्की ,१७ कात्तिक। कास्कीको चुनावी मैदानमा ११३ जना उत्रिएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हिजो भएको उम्मेदवारी दर्तामा ११३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार, प्रतिनिधिसभाका लागि ३७ र प्रदेशसभाका लागि ७६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । कास्कीमा प्रतिनिधिसभातर्फ ३ र प्रदेशसभा तर्फ ६ निर्वाचन क्षेत्र छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कास्की ...
2017-11-03	Leaveacomment 109 Views
कागती भिटामिन सी, पोटासियम तथा फाइबर लगायतका पौष्टिक तत्वहरुको भण्डार हो । यो मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी छ । कागतीलाई विभिन्न स्वरुप र प्रकारमा खाइन्छ । चाहे पानीमा हालेर होस् वा चियामा, अनि तरकारी वा खानामा र अचार बनाएर । कागती पानी पिउनुको मुख्य फाइदा के हो भने यसले तौल घटाउन ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । यस भिटामिनले प्रतिरक्षा प्रणालीको ...
2017-11-03	Leaveacomment 113 Views
बलिउडका नायिकाहरुबीच आपसी सम्वन्ध त्यति राम्रो छैन । कसैको फिल्म खोसेको निहुँमा त कसैको व्वाइफ्रेण्ड खोसेको निहुँमा एक-अर्कालाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न सक्दैनन् । तर, दीपिका पादुकोण र आलिया भट्टको कुरा अलग छ । उनीहरु एक-अर्काको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । दीपिकाको नयाँ फिल्म पद्मावतीको ट्रेलर हालै सार्वजनिक भएको छ । आलियाले उक्त ट्रेलरलाई लिएर दीपिकाको जमेर प्रशंसा गरिन् । एउटा पोडकास्टमा आलियाले दीपिकाको ...
2017-11-03	Leaveacomment 119 Views
काठमाडौं, १७ कात्तिक। आगामी मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरण निर्वाचनका लागि कतै खराब आचरणका व्यक्तिको उम्मेदवारी त परेको छैन ? यदि परेका उम्मेदवारीमाथि तपाईंलाई चित्त बुझेको छैन भने उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराउन सक्नु हुनेछ आयोगले हिजो दर्ता भएको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी दिनका लागि शुक्रबारको समय दिएको छ । आयोगका अनुसार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ ...